Amasela? Ovelha, isigaba esisezantsi sathengi abathengi kunye nabadayisi ababizayo domainers.
Ku ukuthenga igama o domínio elahla okanye elidlulayo (eyaziwa ngokuba: ukuyeka ukubamba) também significa imisebenzi engekho mthethweni ngokwalo: .
Ovelha, ukuba é um omeleyo kuthetha ukuba ufanele uqiniseke ukuba amagama othengiweyo awunalo uphawu-oko kungabonakali iimpawu zokurhweba ezibhalisiweyo-ngaphandle koko, unokuba noxanduva cybers. Emva koko, kukho abalawuli beendawo ezizithengayo ngeenjongo zokuthengisa, kwaye oku kungenye em esemthethweni.
Ngelishwa, ayingabo bonke abathengisi abasebenza kakuhle. Ezinye zezokuthetha ngokucacileyo, zixakile nun ukuba isizinda esithile-ukuba bayayifumana inomdla ngegama lakhe, i-PageRank, ikhonkco elidumileyo, i-Alexa okanye i-moz lombhalisi okanye uzame ukwaphula imfihlo zabo.
Kuyacaca ukuba esichazwe ngaphambili ASIYO imisebenzi esemthethweni. Ukurejista domínio de engajamento y enye, kodwa ukunyanzela obhalisileyo ukuba anikezele ngegama labo lesizinda ayamkelekanga. Kwaye krwada. Ndifumene nalolu hlobo lokuxhatshazwa, kwaye ukuba wenzile, nawe, uyazi kakuhle ukuba kunokuba yingozi kangakanani kwishishini lakho.
1 1. Ungalokothi, Ungalokothi Uvumele-Domínio I yakho iphele
1.1 Pedido em Domínio Principal do Domínio do Domínio Yindlela yokuthenga ngokusemthethweni?
2 2. Bloqueio de domínio de Khubaza
3.1 Ubhaliso beZakhiwo kunye noKhuselo lwe-OMS
4 4. Domínio I yakho ayiyikuthengiswa
1. Ungalokothi, Ungalokothi Uvumele-Domínio I yakho iphele
Hlaziya igama lakho lesizinda (ubuncinci) ubuncinci iinyanga ezimbini ngaphambi komhla wokuphelelwa kunye nexesha elingaphantsi kweminyaka emibini. Por favor, faça o seu login ou cadastre-se para obter mais informações sobre os domínios e domínios iuba do Reino Unido, incluindo os domínios iuba e os domínios iuba do site isodinda-iDomain Backorder – eya kubanika ithuba ‘lokucwangcisa’ i-domain yakho of iphelelwe kwaye yenziwe ukuba ibhaliswe.
Você também pode registrar-manter um desses: ukuba isetelwe kwi-REDEMPTIONPERIOD okanye kwi-PENDINGDELETE, khawuleza uyixhase. Kukho iikhowudi zobume ezingakumbi ngaphandle kwezi zimbini kunye noluhlu apha ikhowudi yesimo esisezantsi yesizinda okukunika iinkcazo zegama lakho legama lesizinda.
Pedido em Domínio Principal do Domínio do Domínio Yindlela yokuthenga ngokusemthethweni?
Ngokubanzi, ukubuyela umva kuthathwa njengento esemthethweni, nangona kunjalo kuyingozi kumthengi. Agora, faça o pedido em espera em todos os casos em que uma pessoa está lesionada, usuária comum, ou seja, se você quer ter um domínio exclusivo do domínio de domínio, você está aqui. Imida yeDomain iyabiza xa kuthelekiswa namaxabiso asisiseko asezantsi, ngoko ke ayisoloko iyinto yokuqala ekufuneka uyiqwalasele xa ufumana igama lesizinda. Nazi ezinye zewebhusayithi ezidumileyo zokwenza isetyhula:
2. Bloqueio de domínio de Khubaza
Okwangoku ubhalisa igama elitsha le-domain, umbhalisi wakho uyakufaka i-Domain Lock ngokuzenzekelayo. Bloqueio de domínio Iindlela yokhuselo ekwala ukuhanjiswa okungagunyaziswanga kwegama lakho lesizinda kwabanye ababhalisi, kodwa unokufuna ukuyikhubaza okwethutyana ukuvumela ukudluliselwa okanye ukwenza ezinye iinketho. Hoje, nikela ingqalelo kwindima ebalulekileyo edlalwe kolu khetho kwaye ukhumbule ukwenza kwakhona emva kokuba ugqibile, kuba le yinkqubo ekhuselekileyo yokunqanda abanqolobi abakhohlakeleyo uk.
Nanku umzekelo wesiphumo esingakhuselwanga .com domínio iziphumo ze-WHOIS, ezibandakanya iinkcukacha zomgcini
Zonke iimbuzo ze-WHOIS ezikhuselekile zibuyisela ulwazi olubanzi malunga nobhalisi kwaye akukho nye enye. Você também pode espionar o WHOIS, o serviço de hospedagem de host I-WHSR Spy ou who.is, o serviço de hospedagem de websites baseado no i-OS e no UNIX, ou seja:
Ubhaliso beZakhiwo kunye noKhuselo lwe-OMS
Vai Papai US $ 7,99 / ngonyaka
Igama eliphantsi livre
4. Domínio I yakho ayiyikuthengiswa
Você pode adicionar yephepha lasekhaya okanye inkunkuma, como também ukuba zonke iziphakamiso ukuthenga idilesi yakho ziya kugxothwa ngokuzenzekelayo. Ukuba irejista yakho ivumela ‘igama lombutho’ okanye ‘idilesi yesitrato eyongezelelweyo’, sebenzisa enye ethi ‘DOMAIN HAYI UKUZE Kuthengise’. Este sicwangciso siza kunciphisa amathuba okuba i-domainer ifikelele kuwe nge-imeyile ukucela isicatshulwa.
Zama ukungayikhathaleli ii-imeyile zesicelo esingxamisekileyo. Kwimeko (enqabileyo) xa bekuthuka okanye besoyikisa, baxele kumboneleli wakho we-imeyile kunye nombhalisi, okanye kwi-ISP iuba domínio ukuba ikhona. Ukungcolisa kunye nokukhokelela kulwaphulo mthetho kunokutshutshiswa ngumthetho.
Domínios I-manhosos: bazama ukukuphatha, ukukhupha umkhuseleko wakho kunye nentembelo ukuze bafike ekufumaneni i-domain yakho ngaphandle kwemvume yakho.
Unganikezeli! Igama lakho lesizinda lingelakho ngenxa yesizathu, usa nzima ukukhulisa udumo lwalo kunye nexabiso laso kwizinjini zokukhangela. Musa ukuvumela ii-‘vila ‘zikusebenzise kakuhle iziqhamo zomsebenzi wakho. Mostrando kokuba unomdla ekuthengiseni i-domain yakho, thintela ukuwela kumgibe we-domain eqwalaselweyo.